Hiran State - News: Mudane ka tirsan baarlamaanka Somaliya ayaa xilkiisa iska casilay halka kuwo kalena lagu wado iney iscasili doonaan.
Mudane ka tirsan baarlamaanka Somaliya ayaa xilkiisa iska casilay halka kuwo kalena lagu wado iney iscasili doonaan.
Somalia:(HS)- Kedib shirkii Kampala waxii ka danbeeyey waxaa shakiweyn la galiyey madax banaanida dalka Somaliya ha yeeshee dadku maalinba maalinta ka danbeysa ayey dareemayeen in uusan wadankoodu xor aheyn, waxaana hada bilaawday iney qaar mudanayaasha baarlamaanka ka tirsan iska casilaan amaba ka tanaasulaan xubinimadoodii halka kuwo kalena lagu wado iney iscasilaan dhawaantaan.
Mudane lagu magacaabo Shiikh Ali oo ku soo biiray amaba ka mid ahaa 275tii mudane ee kaka soo biirtay baarlamaanka shirkii Jabouti ee lagu doortay madaxweynahii hore ee Somaliya waxii ka horeeyey shirkii Kampala Shiikh Shariif Shiikh Ahmed iscasilay. hadaba mudanahan iyo mudanaal kale ayaa qorsheynayo iney xilkaasi iskaka tagaan walow ay qaar mudanayasha ka tirsan ee ku sugan gudaha sheegeen in ay baarlamanka ugu jiraan biilka caruurtooda laakinse ay mar hore iskaka tagi lahaayeen shaqadan.
Shaki kuma jiro in dalka Somaliya ku jiro gumeysi rasmi ah waxii ka horeeyey shirkii Kampala Accord loogu magac daray oo awooda looga xayuubiyey madaxweynaha Somaliya iyo baarlamaankaba.warar xaqiiqda u dhaw ayaa sheegayo in hadii waxii ka soo baxay shirkii Kampala la horgeyn waayo baarlamaanka ay mudanayaal badan u qorsheysan tahay iney iska casilaan xilka magac u yaal ah ee wadanka gumeysiga ku jiro u hayaan.
Marka laga soo tago mudanahan iscasilay hadane baarlamaanka Soamliya tiradiisu waa 1800 mudane ku dhawaad maadaama gudoomiyaha baarlamaanka uu qabiilkasta ka dhaariyey 3 mudane oo mid markuu dhinto amaba iscasilo uu hayo kii uu ku bedeli lahaa ileen meeshu waa maqaayad ookale hanaan dowladeed kama jiro.
· admin on July 05 2011 13:01:42 · 0 Comments · 1554 Reads ·
14,637,861 unique visits